Nidaamka Khaaska ah | Rootiyooyinka iyo calaamadaha ciribtirka
All CategoriesHantidhowrka Forex (13)Download free (10)Muujiyeyaasha (1)Koodka furan ee EAs (3)
Maaliyadda iyo wararka dhaqaalaha
Warbixinta Forex iyo shirkadda
Wararka iyo fikradda ku saabsan dhaqaalaha
Baanka dhexe ee wararka
Dib u eegista suuqyada
Sida loo ganacsado faa'iido leh
Falanqaynta aasaasiga ah ee suuqa Forex
Falanqaynta Farsamada ee suuqa Forex
Home » Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Signal2forex.com waxaa ka go'an ilaalinta asturnaantaada. Waxaan fahamsanahay inaad rabto inaad macluumaadkaaga ku hayso mid gaar ah, ammaan ah iyo kala go '. Siyaasadda Khaaska ah waxaa loogu talagalay inay kaa caawiso inaad go'aansato haddii aad isticmaasho Bogga iyo wixii ah.
OGGOLAANSHO ISTICMAAL WARBIXIN
Siyaasaddani waa heshiis sharci ah oo dhexmara adiga iyo annaga. Adigoo soo booqda, helitaanka ama isticmaalka Website-ka, ama bixinta macluumaadka noo, waxaad aqbashaa shuruudaha Siyaasaddaan Khaaska ah, oo aad ogolaatay ururinta iyo isticmaalka macluumaadka. HADDII AAD U QAADAN KARTAA SIYAASADDA SIYAASI KA HELI KARO, FADLAN TALO KA HELO ISTICMAALKA SIYAASADDA.
Qeexitaanada Shuruudaha iyo Shuruudaha waxay khuseeyaan Siyaasadda Khaaska ah haddii aan si kale loo sheegin. SIYAASADDA SIYAASADEED, FADLAN SI FIICAN OO LOOGU JIRO SHARCIYADA IYO SHURUUDAHA WAXAA WAXYAABAHA LAGU QAADAY IN LAGU QAADO.
WAA MAXAY MACLUUMAAD KU SAABSAN DOONO?
Waxaan ka soo qaadannaa laba nooc oo macluumaadka iyo macluumaadka ah:
1. Macluumaadka aan shakhsi ahaaneed - Waxaan haynaa macluumaadka aan shakhsi ahaan loo aqoonsan karin ("Macluumaadka aan Shakhsiga ahayn"), sida geo-goobta qiyaastaada, codsigaaga webka, nooca browser, luuqadda browserka, bogagga shabakadda ee aad booqatid ka hor ama ka dib booqashada boggeena , URL-yada, nooca mashiinka, lambarrada guusha, bogagga soo degaya, bogagga loo eegay iyo amarka bogagga iyo wakhtiga lagu kharash gareynayo boggaga. Macluumaadkan waxaa la ururiyaa laguna hayaa sababo nabadgelyo awgood iyo si aan u kormeeri karno iyo xisaabinta isticmaalka xisaabtan, xisaabi kara asxaabteena, iyo xisaabinta lacag-bixinta dhinacyada saddexaad.
"Kukiyada" - Macluumaadka aan shakhsi ahayn ayaa la ururiyaa, oo ay ka mid yihiin, isticmaalka cookies, markaa helitaanka ama isticmaalka Website, waxaan isticmaali karnaa hal ama dhowr cookies. Kukiyada waa faylasha qoraallada yaryar, oo lagu rakibay qalabka isticmaalaha, taas oo u suurtagelisa website-ka inuu xasuusto doorbidka isticmaalaha. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan "cookies" iyo sida aan ugu adeegsano Website-ka iyo boggaga kale ee fulinaya qalabkayaga shabakada waxaa laga heli karaa Nidaamkayaga Qashinka, kaas oo sidoo kale sharxaya sida aad u karin karto cookies ama u xakameyso.
2. Macluumaadka Shakhsi ahaaneed waa macluumaadka laga yaabo in uu noqdo mid gaar ah ama mid xasaasi ah. Waxaan soo aruurineynaa Macluumaadka Shakhsiyeed ee soo socda markaad sameyso xisaab ("Account") oo ku yaal Website-ka kaas oo looga baahan yahay inuu galo qaybo ka mid ah Adeegga: magacaaga, waddanka, emailka, lambarkaaga iyo lambarka telefoonkaaga.
WAA MAXAY TAHAY IN AAD U HESHO MACLUUMAAD KU SAABSAN?
Si loo helo adeegyadayada, waxaa laga yaabaa in dadka isticmaala laga codsado inay buuxiyaan foom, iyagoo siinaya macluumaadka shakhsiyeed Shirkadda. Jawaabaha su'aalaha ku saabsan Macluumaadka Shakhsiyadeed ma aha qasab haddii aan laheyn calaamadaha calaamadda.
Waxaan soo aruurineynaa macluumaadka kor ku xusan si aan kuu siino adeeg fiican. Macluumaadkaaga Shakhsiga ayaa sidoo kale noo ogolaanaya inaan ku siino taageero farsamo iyo taageero.
Macluumaadka aan shakhsiga ahayn waxaa loo ururiyaa cilmi baarista iyo ujeeddooyinka tirakoobka, si aanu awood ugu yeelano inaanu horumarinno, u habeyno lana hagaajino Adeegga, oo ku saleysan doorbidkaaga, isticmaalka iyo isdhexgalkaaga adeegga, si loo hirgeliyo codsiyadaada macluumaadka, iyo in aad siiso alaabta iyo adeegyada la xiriira.
YAA YEELANAYAA MACLUUMAAD KU SAABSAN?
Waxaan la wadaagnaa Macluumaadka Shakhsiyadeed iyo kuwa aan-Shakhsiyadeed ee dhinacyada saddexaad, marka loo baahdo si loo bixiyo, dayactirto ama loo hagaajiyo adeegyadayada iyo qaliinka. Kani waa kiiska xayaysiisyada iyo shirkadaha kale ee saddexaad; waxaan macluumaadkaaga la wadaagnaa dhinacyada saddexaad ee ujeedada ah inaan ku siino xayeesiinta oo aan bixinno annaga ama seddexaad dhinacyada waxay u maleynayaan inaad xiiseyneyso.
Waxaan wadaagnaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed iyo kuwa aan-shakhsi ahaaneedba:
- dhinac saddexaad oo adeegyo u fidiya adeegga, oo ay ku jiraan bixiyeyaasha adeegga emailka iyo xogta macluumaadka;
- dhinac saddexaad oo bixiya adeega shirkadda marka la eego howlgalka Websiteka; -
- xisaabiyeyaasha ama lataliyayaasha kale ee kantaroolaya hawlaha ganacsi ee shirkadda;
- wax kasta oo iibsadaha ama maalgashatada shirkadda.
Qodob kasta oo ay sameeyeen mid ka mid ah bixiyeyaasha adeegga qaybta sadexaad ("Recipients"), ayaa, marka sharcigu u baahan yahay, in lagu maamulo heshiis shaqo oo ku habboon qaabka looga baahan yahay sharciga, ilaalinta mid kasta iyo dhammaan xuquuqahaaga ilaalinta xogtaada iyo waajibaadka Soo-qaadayaasha si loo ixtiraamo Macluumaadka Shakhsiyadeed loona qabto iyada oo la raacayo sharciyada khuseeya. Dibloomayaasha waxaa looga baahan yahay inay ilaaliyaan sirta macluumaadka noocaas ah iyo inay isticmaalaan macluumaadkaaga shakhsiyeed keliya marka la eego bixinta adeegyada kor ku xusan iyo keliya ujeedooyinka adeega Signal2forex.
Waxa kale oo laga yaabaa in aan la wadaagno Macluumaadkaaga Shakhsi ahaan iyo macluumaad kale haddii aanu haysano sabab wanaagsan oo loo aaminsanyahay in ay lagama maarmaan tahay in: - u hoggaansamo sharciga ama amar maxkamadeed; - Inay ogaadaan, ka hortagaan khayaanada cinwaanka, amniga, ku xadgudubka siyaasadaha ama arimaha farsamada; - hirgalinta qodobbadan Siyaasaddaan Khaaska ah ama heshiisyada kale ee u dhexeeya adiga iyo adeega Signal2forex, oo ay ku jiraan baaritaanka ku-xadgudubyada suuragalka ah.
Ururinta iyo farsamaynta Macluumaadka Shakhsi ahaaneed waxaa loogu talagalay inay ku siiso Adeegga, inuu kuugu soo diro suuqyada ama adeegyada aan u malaynayno inay kugu habboon yihiin, iyo inaad fuliso ujeedooyin kale sida ku qeexan siyaasadda gaarka ah. Adeega signal2forex wuxuu ku kaydin doonaa xogtan illaa iyo inta aan rumaysanahay in ay tahay lagama maarmaan iyo habboon si loo bixiyo oo loo maareeyo adeegyadayada.
AMMAANKA IYO QAABKA
Adeegga Signal2forex wuxuu kuula dhaqmayaa macluumaadkaaga shakhsiyeed qarsoodi adag, iyo xogta xogtaas lagu keydsanayo waxaa ka mid ah tallaabooyinka ammaanka ee lagama maarmaanka u ah si looga hortago burburka ama sharci-darrada ah, burburka, isbeddelka, daahfurnaanta iyo helitaanka. Si kastaba ha ahaatee, si buuxda uma xaqiijin karno amaanka macluumaadkaaga, kuwaas oo laga yaabo in la heli karo, la shaaciyey, la bedelay, loona burburiyey, waana in la xoojiyaa in aad macluumaadkaas la wadaagto khatartaada.
Xiraya boggag KALE
Nidaamkan Qarsoodiga ahi wuxuu khuseeyaa oo kaliya Adeegga. Siyaasaddu ma khusayso website-yada sadexaad, oo ku xiran Website-ka. Bogagga sadexaad ee sadexaad ama adeegyo ayaa laga yaabaa inay yeeshaan siyaasadahooda gaarka ah, waxaana kugula talinaynaa inaad si taxadar leh u akhrido. Ka hor inta aan la isticmaalin goobaha iyo adeega sadexaad ama ka hor intaan la iibsan, waxaan kugula talinaynaa in aad akhrido oo aad fahamto siyaasadaha gaarka ah ee shuruudaha iyo shuruudaha boggaga internetka iyo adeegyadaba, iyo damaanada alaabooyinka iibsanaya. Waad ogaaneysaa oo si ikhtiyaari ah ayaad u maleyneysaa inaad halis u tahay isticmaalka boggaga saddexaad si aad u iibsato alaabada iyo adeegyada. Waxaad qiraysaa oo aad ogolaatay inaanan wax masuuliyad ah u laheyn wax kasta oo la xidhiidha goobaha sadexaad ee noocaas ah iyo isticmaalkaaga.
U DIYAARINAYO SIYAASADDA
Siyaasaddaan Khaaska ah waxay ku xiran tahay isbeddel. Fadlan calaamadee "Last Modified" oo cinwaankiisu yahay hoose ee dukumiintigan si aad u aragto markii Siyaasada Khaaska ah ee ugu dambeysay la cusbooneysiiyay. Isbedel kasta ee Siyaasadda Khaaska ah waxay noqon doontaa mid waxtar leh marka aan dirno Nidaamka Qarsoodiga ah ee dib loo eegay Website-ka. Isticmaalkaaga Shabakadda ama Adeegga, ama bixinta macluumaadka shakhsi ahaaneed ee isbeddel kasta oo macnaheedu yahay in aad aqbasho Siyaasadda Khaaska ah ee la cusbooneysiiyey.
Isbedelkii ugu dambeeyay: 05 january 2018
Download bilaash ah (10)
Furaha koodhka EA (3)
Ma waxaad doonaysaa inaad faa'iido u hesho 300% bishiiba suuqa suuqa? Isticmaal noojooga 'Hyberpack forex robot'. Waxaan xaqiijineynaa natiijada video live!
Furfur koontarool ku saabsan ganacsiga leh macmiil la isku halleyn karo:
Ku rakib shirkadda VPS ee adeegga ganacsadaha ee mid ka mid ah bixiyeyaasha ugu dhakhsaha badan:
Signal2forex.com - Rikoodhka ugu fiican iyo calaamadaha
Miyaad rabtaa inaad hesho faa'iidooyinka iyo jaantusyada noocaas ah? Xulo Hyberpack EA si aan ganacsi ugu iibsano suuqa forex ee ...
ganacsi si toos ugu fiican robot Forex Tilmaamaha loo yaqaan 'Forex Advisor' ADX jimicsiga jimicsiga CCI forex EA bilaash ah forex robot download bilaash ah mashiinka forex mashiinka Kombiyuutarada oo bilaash ah oo rikoodh ah Kaltner oo ka shaqeynaya gawaarida robot guuritaanka robot celceliska Tilmaamaha forex faafin
Falanqaynta aasaasiga ah
2018 © adeegal2forex adeegga. Dhamaan xuquuqda.
Digniinaha Khatarta: Cinwaanka Signal2Forex ma qaadi doonto mas'uuliyad lacageed oo lumis ah lacagtaada sababtoo ah isticmaalka alaabta laga iibsaday boggan, oo ay ku jiraan la-taliyayaal takhasus iyo calaamado muujinaya. Sidoo kale sicirrada sicirka iyo qiimaha la soo bandhigay ee wariyeyaashu waxay noqon karaan kuwo sax ah oo laga yaabo in ay ka duwanaan karaan qiimaha dhabta ah ee suuqa, taasoo macnaheedu yahay qiimaha waa wax calaamadeysan oo aan ku habooneyn ujeedooyinka ganacsi. Waa inaad fahantaa khatarta iyo kharashyada la xidhiidha ganacsiga suuqyada maaliyadeed, waa mid ka mid ah foomamka maalgelinta ee khatarta ah.
La wadaag badeecadan!